बाल कल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालयमा २ हजार ६६५ विद्यार्थी !
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ ३१, २०७६
रोल्पा ।रोल्पा सदरमुकाम लिवाङमा रहेको बालकल्याण नमूना माध्यमिक विद्यालयले बितेको एक दशकयता गरेको शैक्षिक सुधारसँगै अभिभावकको आकर्षण बढ्न थालेको छ । सरकारी विद्यालयको पठनपाठन राम्रो नहुने भन्दै निजी विद्यालयतर्फ आकर्षण बढिरहेको बेला रोल्पाको उक्त विद्यालय भने अभिभावकका लागि आकर्षणको केन्द्र...
स्थानीय तहले थाल्याे समायोजनः भीरकोटका छ विद्यालय गाभियाे
एक करोड ७७ लाखमा चारकोठे विद्यालय भवन
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ २९, २०७६
स्टेसनरी सामग्री सहित छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ २८, २०७६
नुवाकोट । नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाका दुई विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड र भेन्डिङ मेसिन वितरण गरिएको छ । २०७६ जेठ २७ गते सोमबार भएको एक कार्यक्रममा लिखु गाउँपालिकास्थित चौघडामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला नेता एवं लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ डाउनटाउनका...
गर्मीका कारण नगरभरिका विद्यालय बन्द
कैलाली । अत्यधिक गर्मीका कारण कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । गर्मीका कारण अध्ययन अध्यापनमा समस्या हुन थालेपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । टीकापुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका विद्यालय...
हावाहुरीले विद्यालयको छाना उडायो, ३०५ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ २६, २०७६
बैतडी । २०७६ जेठ २५ शनिबार राति आएको हावाहुरीले बैतडीका विद्यालयको छाना उडाएको छ । विद्यालयका छाना उडाउँदा पठनपाठन कार्य प्रभावित भएको छ । हावाहुरीले पाटन नगरपालिका९ स्थित सिद्धेश्वर मावि हुक्केडाँडाको तीनकोठे विद्यालय भवनको छाना उडाएको छ । हावाहुरीले छाना...
एक हजार ४१ विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाले दियाे सौर्यबत्ती
जुम्ला । सिञ्जा गाउँपालिकाले १२ विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सौर्यबत्ती वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाको जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहज होस भन्ने उद्देश्य यी सौर्यबत्ती वितरण गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले कक्षा ८, ९ र १० सम्म सञ्चालन गरेको माध्यामिक...
शिक्षकमात्र भएको विद्यालय बाँकेमा
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ २१, २०७६
बाँके। विद्यालय भन्नेबित्तिकै हामीले सोच्ने गर्छै जहाँ विद्यार्थी र शिक्षकहरु हुन्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीलाई ज्ञानगुनका कुरा सिकाइरहेका हुन्छन् । डुडुवा गाउँपालिका५ नानुपूर्वामा रहेको एउटा सरकारी विद्यालयमा तपाईंले सोचेजस्तो देख्नुहुन्न । जनता कल्याण राष्ट्रिय प्राथमिक सामुदायिक विद्यालयमा एकजना पनि विद्यार्थी छैनन्...
कर्णाली स्कूल: मुक्तकमैया, सुकुम्बासी र दलितका ४१ विद्यार्थी सब इञ्जिनीयर बन्दै
कैलाली । टीकापुर नगरपालिका१ वनगाउँतर्फ सिँचाइका लागि लगिएका दुई कुला । तीनै कुलाका बीचमा सानो टुक्रे जमीन । त्यही जमीनमाथि थोत्रो विद्यालय अनि झुत्रे विद्यार्थी । वि.सं २०४५ मा स्थापना भई प्रावि तहसम्म मात्र सञ्चालनमा रहेको सो विद्यालयमा विपन्नका छोराछोरी...
शिक्षिकाको यातनाबाट पाँच विद्यार्थीको हात भाँचियो
दाङ । रोल्पाको रुम्टीगढी गाउँपालिका८ स्थित भानु आधारभूत विद्यालयकी एक शिक्षिकाको निर्मम कुटाइबाट १४ जना विद्यार्थी घाइते भएका समाचार छ । घाइतेमध्ये कतिपयको हात नै भाँचिएको छ । सो विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनले विद्यालयमा ढिलो गरी आएको भन्दै ती विद्यार्थीमाथि...
एउटा कोठामा तीनवटा कक्षा सञ्चालन
तनहुँ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका१० बाड्राङस्थित शान्ति वर्ष प्राथमिक विद्यालयमा एउटै कक्षा कोठामा तीनवटा कक्षा सञ्चालन भइरहेकाे छ । २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदा कक्षाकोठा अभाव भएकाे हाे ।त्यसैले बेग्लाबेग्लै शिक्षकले बेग्लाबेग्लै कक्षाका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउनेगरेका हुन् ।प्रधानाध्यापक...
कर्णाली प्रतिष्ठानलाई एमडिजिपी पढाइको लागि अनुमति
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा एमडिजिपी (डाक्टर इन मेडिसिन इन जनरल प्राक्टिस) विषयको पठनपाठनको लागि बाटो खुलेको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०७६ साल जेठ १९ प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी पढाइ गर्न अनुमति दिने निर्णय...
विद्यालयको जग्गामा १० पक्की, १२३ अर्धपक्की घर र ७२ टहरा
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ १९, २०७६
महोत्तरी । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका२ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको अर्बौ मूल्यको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । विसं २०१६ मा स्थापित यस विद्यालयको १० बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको हो । अतिक्रमित जग्गाको मूल्य...
‘संस्कृत केवल कर्मकाण्डी गर्ने विषय मात्र होइन’
ललितपुर । जयतु संस्कृतम्का अध्यक्ष डा. बद्री पोखरेलले संस्कृतले मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवःका साथै गुरु देवो भवःको शब्द उच्चारण गरी यसले हरेक मानिसमा शुद्धता र स्पष्टताको ज्ञान पैदा गराउने बताउनुभएको छ । शनिबार जीयर शैक्षिक...
मङ्गला मावि म्याग्दीमा कृषि विज्ञान विषयको पठनपाठन शुरु
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ १८, २०७६
म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका स्थित बाबियाचौरमा रहेको मङ्गला माविमा कृषि विज्ञान विषयको पठनपाठन शुरु गरिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय अन्तर्गत चालू शैक्षिक सत्रदेखि उक्त विषयको पठनपाठन शुरु गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।...
गाँउपालिकाद्वारा अनाथ बालबालिकालाई भत्ता वितरण गर्ने
बैताडी । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका टुहुरा बालबालिकालाई भत्ता वितरण गरिने भएको छ । यहाँका २० टुहुरा बालबालिकालाई मासिक रू दुई हजारका दरले भत्ता वितरणको तयारी भएको गाउँपालिकाका कार्यालय सहायक अम्बादत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो । माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत त्यस्ता बालबालिकालाई पढाइमा सहयोग...
योगशिक्षाको पाठ्यपुस्तक छपाई अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । योग शिक्षालाई विद्यालयस्तरमा राखिने तयारी थालिएको छ । शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले योग विषयलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पुस्तक छपाई को काम भइरहेको जानकारी दिनु भएको छ । नेपाल सरकारले योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, योग...
सामाजिक सञ्जालमार्फत सहयोग जुटाएर कमैया बस्तीमा विद्यालय भवन निर्माण
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ १७, २०७६
कैलाली । कैलालीका १३ युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहयोग जुटाएर कैलालीको लम्कीचुहास्थित मुक्त कमैया बस्तीमा विद्यालय भवन निर्माण गरेका छन् । क्रिएटिभ नेपालमा आबद्ध युवाहरुले लम्कीचुहा नगरपालिका१ स्थित मुक्त कमैया बस्तीमा नमूना अध्ययनगृहको पक्की भवन निर्माण गरेका हुन् । युवाहरुले एक...
गणतन्त्र दिवसमा शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोशाक वितरण
कास्की । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका४ भदौरे देउरालीस्थित बहादुरे माध्यमिक विद्यालयका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोशाक वितरण गरिएको छ । गुड नेवर्स इन्टरनेशलन नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग एवं नौलो घुम्ती नेपालको आयोजना तथा विद्यालयको सहकार्यमा विद्यालयमा...
दलित भएकै कारण स्थायी शिक्षकलाई हाजिर गराइएन
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ १६, २०७६
महोत्तरी । दलित भएकै कारण महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकास्थित स्थायी शिक्षकलाई विद्यालयका प्रधानाध्यापकले हाजिर नगराउँदा विगत तीन दिनदेखि तालाबन्दी गरिएको छ । पिपरा गाउँपालिका४ स्थित रामनारायण अयोध्या माध्यमिक विद्यालयमा एक दलित शिक्षकलाई हाजिर नगराउँदा स्थानीयवासीले सो विद्यालयमा मङ्गलवारदेखि तालाबन्दी गरिदिएका...
लकडाउनको विषम परिस्थिति : खुकुलो बनाउने कि ठुलो आर्थिक–सामाजिक दुर्घटना निम्त्याउने ?
नक्सा जारीको हाइहाइ: सामाजिक सञ्जालमा कि भूमि फिर्ता गरेर नेपाल र नेपालीको मनमा सुनौलो अक्षरमा लेख्ने !
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक ( पूर्ण विवरणसहित)
लकडाउन पश्चात विद्यालय पुन:सञ्चालनका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू
प्रविधिको दुरुपयोग होइन सदुपयोग : ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्दै स्वनिर्भर हुन तालिम केन्द्र आवश्यक छ र ?
काठमाडौँ सहर, हेर्न लाग्यो रहर : अहिलेको रूप टिकाई राख्ने चुनौती र हाम्रो दायित्व
सेन्ट्रल जेल र भद्र बन्दी गृह नरक र स्वर्ग जस्तै फरकः पैसा दिई मिलापत्र गरी बाहिर आउने प्रस्ताव अस्वीकार !
देशभक्ति सम्बन्धी केही हाइकु
डिशहोमको लक्की ड्रमा दुई जनाले प्राप्त गरे एक एकलाख